Sida loo kiciyo ikhtiyaarka lagu soo ridayo hubka fudud ee PUBG Mobile | Androidsis
Haddii aad tahay gambar-gacmeedka 'Mobile PUBG', waxaad u badan tahay inaad ku ogtahay taas cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Tencent ay sii deysay ciyaarta, oo timid seddex toddobaad ka hor, Hubi hubka sida Frying Pan ama Sickle hadda waa la tuuri karaa.
Tani si wanaagsan ayey hoos ugu dhacday bulshada ciyaaraha, gaar ahaan streamers kuwaas oo u heellan abuurista waxyaabo madadaalo leh, maaddaama ay caado tahay in lagu baabi'iyo cadaawayaasha ugu dambeeya ee cayaaraha walxaha melee, ama adoo ku garaacaya kuwan ama ku tuuraya. Hoos waxaan ku sharraxeynaa sida loo kiciyo doorashadan noo oggolaaneysa inaan sameyno wixii la yiri, haddiiba ay dhacdo in la joojiyo.
Marka waxaad awood u yeelan kartaa ikhtiyaarka ah inaad ku bilowdo hubka fudud ee PUBG Mobile
Si aan u bilowno walxaha xiisaha leh haddii aan rabno iyo karno, waa inaan xaqiijinno haddii xulashada u dhiganta si habboon loogu qaabeeyey goobaha ciyaarta. Si tan loo sameeyo, waxaan u jeesanaynaa qaabeynta iyo, sanduuqa Asaasiga ah, waxaan u dhaadhacaynaa gunta xulashooyinka; halkaas ayaan ka heli doonnaa gelitaan la yiraahdo Waxqabadka Bilawga Degdegga ah, taas oo ah mida ay tahay inaan dhaqaajinno adoo si fudud ugu gudbinaya midig dhanka midig.
Ka dib markii hore ikhtiyaarka la hawlgaliyay, hadda ikhtiyaar ayaa ka dhex muuqan doona qaabkeena badhanka kaas oo na siinaya inaan riixno oo aan dooranno haddii aan dooneyno inaan bilowno hubka melee, kaas oo noqon kara min barrette ilaa digsi shiil, sickle ama machete. Tan waxaa loo samayn karaa si la mid ah sidii aan ula macaamili lahayn qiiq, kala-goyn ama bam-gacmeed indho sarcaad ah.
Haddii aynaan rabin in aan bilowno melee, waxaan si fudud gacanta ugu weerari karnaa sidii had iyo jeerba lagu sameyn jiray ciyaarta, anaga oo ka tagna ikhtiyaarka Weerar firfircoonaan halkii Tuur. [Baro: Waa maxay wareegga iyo sida loogu isticmaalo in lagu wanaajiyo xakameynta hubka ee PUBG Mobile [Hagaha ugu badan]]
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sida loo kiciyo ikhtiyaarka ah in lagu weeraro hubka fudud ee PUBG Mobile
Taageero moobiil xaalad kasta
Samsung waxay soo saari kartaa Galaxy Note cusub si ay u macasalaameyso xadkaan